मानिसको मृत्युपछि के हुन्छ ? यस्तो थियो बुद्धको जवाफ
बुद्धलाई एक शिष्यले सोधेछन्- 'मृत्युपछि के हुन्छ, तपाईंले आजसम्म यसबारे किन केही बताउनुभएन ?'
शिष्यको कुरा सुनेपछि मुस्कुराउँदै बुद्ध बोलेछन्- 'पहिले मेरो एउटा प्रश्नको जवाफ देऊ, त्यसपछि म बताउने छु मृत्युपछि के हुन्छ भनेर ।'
शिष्यले 'हवस् !' भनेपछि बुद्धले सोधेछन्- मानौं तिमी कतै जाँदैछौ । विषले भरिएको एउटा तीर तिम्रो शरीरमा आएर लाग्यो । अब भन, पहिला त्यो तीर निकालेर फाल्छौ कि यो कताबाट आयो, कसलाई निशाना बनाइएको थियो, यो यहाँबाट पार गरेको भए कसलाई लाग्थ्यो, के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नतिर लाग्थ्यौ ?'
शिष्यले जवाफ दिए- 'म पहिला विषले भरिएको तीर नै शरीरबाट निकालेर फाल्थें, नत्र सबै विष मेरो शरीरमा फैलिहाल्छ नि !'
बुद्ध बोले- बिल्कुल ठीक भन्यौ तिमीले । अब तिमी आफैं भन पहिले यो जीवनलाई कसरी साकार पार्ने, दु:ख निवारण कसरी गर्ने भनेर सोच्ने कि मृत्युपछि के हुन्छ भनेर जीवन बर्बाद पार्ने ? जुन कुरा हाम्रो हातमा नै छैन, त्यसबारे सोचेर किन समय बर्बाद पार्छौ ? हाम्रो हातमा सिर्फ कर्म छ । त्यसबारे मात्र सोच्नुपर्छ, जुन कुरा हाम्रो हातमा छ ।
सोह्रश्राद्धमा कस्तो छ पक्षीहरूको महत्त्व ?
स्वस्थ रहन कुन उमेरमा कति घण्टा सुत्ने ?
जुता लगाउन नजान्दा पनि बिग्रिन्छ भाग्य, ज्योतिष शास्त्र यस्तो भन्छ
असोज १० देखि दशैंको नयाँ नोट वितरण, कहाँ-कहाँबाट साट्न पाइन्छ ? (सूचनासहित) काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि असोज १० गतेदेखि नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बालुवाटारसहित विराटनगर, जनकपुर वीरगन्ज, पोखरा, सिद्ध...
संसारमा कुनै धर्म नहुँदा पनि अस्तित्वमा थियो ॐ, यस्तो छ ॐकारको महत्व
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिपावली